टेलिकमको फाइवर टु दि होम’ सेवा शुभारम्भ - Everest Dainik - News from Nepal
टेलिकमको फाइवर टु दि होम’ सेवा शुभारम्भ
गलकोट, असार ३१ । नेपाल टेलिकम बागलुङले आफ्नो सेवालाई गुणस्तरीय तथा द्रुतगतिको इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्नका लागि पूर्णतः फाइवर तारयुक्त बनाएको छ ।
बागलुङ बजारमा नमूनाको रुपमा कपर ९तामाको तार० को प्रयोग हटाई पूर्णतः फाइवर तारको प्रयोग गरी ‘फाइवर टु दि होम’ सेवा शुभारम्भ गरिएको नेपाल टेलिकम बागलुङले जनाएको छ ।
टेलिकमले एक वर्ष लगाएर प्रमुख लाइनको रुपमा जमीनमुनि र शाखा लाइनको रुपमा पोलको प्रयोग गरेर सेवाग्राहीको घरसम्म फाइवर तार बिच्छ्याउने काम सम्पन्न गरेको छ ।
नेपालमै नमूनाको रुपमा रहेको ‘फाइवर टु दि होम’को सम्पूर्ण काम सम्पन्न भई सेवाको सञ्चालन गरिएको नेपाल टेलिकमका प्रमुख केशव शर्माले बताए । ‘सेवाग्राहीको घरघरसम्म तार तथा डिभाइस वितरण गरिसक्यौँ’, शर्माले भने, ‘टेलिकमका नयाँ ग्राहकको घरमा फाइवर सेवा शुरु भयो भने पुराना ग्राहकलाई केही दिनमै सेवा प्रदान गर्नेछौँ ।’
याे पनि पढ्नुस खुशीको खबर ! टेलिकमले ल्यायो अब प्रिपेडमा सापटी सेवा
टेलिकमले नेपालका विभिन्न ठाउँमा फाइवरमार्फत इन्टरनेट सेवा प्रदान गरे पनि बागलुङमा भने इन्टरनेट र फोन दुवै सेवा फाइवरमार्फत दिन थालेको हो । पुरानो प्रविधिको तामाको तारको प्रयोग गर्दा धेरै प्रकारका तार टाँग्नुपर्ने, इन्टरनेटको गति घट्दै जाने, पटक–पटक आउने समस्याले सेवाग्राहीले हैरानी खेप्नुपर्ने अवस्था फाइवर सेवा प्रदान गर्न थालेपछि अन्त्य भएको शर्माको भनाइ छ ।
एक महीनाभित्र सम्पूर्ण ग्राहकलाई कपर विस्थापित गरेर फाइवरमा लगिसक्ने योजना रहेको टेलिकमले जनाएको छ । बागलुङ बजार क्षेत्रमा रहेका करीब तीन हजार ल्याण्डलाइन टेलिफोन तथा सोही सङ्ख्याका एडिएसएल इन्टरनेटका सेवाग्राहीले अब एकैसाथ फाइवर प्रविधिको भ्वाइस तथा डाटाको सेवा लिन पाउनेछन् ।
याे पनि पढ्नुस एक वर्षभित्र देशैभर फोरजी सेवा विस्तार
पुरानो प्रविधिलाई पूर्णतः विस्थापित गरी नयाँ प्रविधिको प्रयोगबाट फाइवर सेवा दिन शुरु गरेको टेलिकम बागलुङले जनाएको छ । नयाँ ग्राहकलाई फाइवर सेवा प्रदान गरेर सेवाको शुभारम्भ गरे पनि अबको एक महीनाभित्र बागलुङ बजारका सबै ग्राहकलाई फाइवर उपलब्ध गराउने टेलिकम प्रमुख शर्माले बताए ।
कपर प्रविधिको इन्टरनेटमा भन्दा फाइवर प्रविधिको इन्टरनेट द्रुत गतिमा चल्ने टेलिकमले जनाएको छ । टेलिकमको नयाँ तथा पुराना ग्राहकलाई निःशुल्क डिभाइस प्रदान गरिएको टेलिकम प्रमुख शर्माले बताए ।
‘पुरानो प्रविधिको एडिएसएल चलाइरहेकालाई पुनः नयाँ डिभाइस किन्न समस्या हुनसक्ने भएकाले नयाँ प्रविधिका डिभाइस टेलिकमले निःशुल्करुपमा उपलब्ध गराउने अभियान शुरु गरेको छ’, शर्माले भने, ‘सेवाग्राहीले निःशुल्क डिभाइस प्राप्त गर्दा पुरानो डिभाइस विस्थापित गर्न सहज भयो ।’
याे पनि पढ्नुस नारी दिवसमा टेलिकमको नयाँ अफर !
हाल तामाको तारमार्फत जडित एडिएसएल इन्टरनेट सेवा दुई एमबिपिएसदेखि पाँच एमबिपिएस गतिमा मात्र चल्ने भए पनि यो प्रविधिको प्रयोग हुँदा घटीमा आठ एमबिपिएसदेखि ५५ एमबिपिएस गतिमा चल्नेछ । फाइवर जडानपछि हाल पुरानो प्रविधिमा प्रयोग भइरहेका आठ वटा तार विस्थापित भई एउटा मात्र तारको प्रयोग गरिएको छ ।
अनावश्यक तार हटाउँदा बागलुङ बजारको सौन्दर्यीकरणसमेत हुने टेलिकमले जनाएको हो । टेलिकमले बागलुङ बजारको जमीनमा अप्टिकल फाइवर बिच्छ्याएर छ हजारभन्दा बढी ग्राहकले लाइन तान्न मिल्ने गरी छ वटा क्याविनेटसमेत निर्माण गरिसकेको छ । रासस
ट्याग्स: nepal telecom